Ny momba ny fananganana milina sy ny DIY - Ikkaro
Handinika momba ny masinina isika. Ahoana ny fomba fananganana azy ireo, fanamboarana azy ireo, ny fomba fiasan'izy ireo, ny nanaovana azy.
Manavaka ny milina sy ny rafitra, satria mino izahay fa ny mekanisma dia mendrika sokajy ho azy ireo, satria manana vondrona ampy hanao izany izy ireo.
Miaraka amin'ny masinina dia miresaka andiana zavatra, singa ary mekanisma izay manana tanjona na tanjona manokana (manova na mamorona angovo, manao asa, sns.)
Fomba fanaovana hypsometatra na zoro ary metatra halavirana
Antsoy tsara izy hypsometatra, saingy tsy dia mazava loatra amiko fa hypsometra io, fa fitaovana fandrefesana ny zoro na ny haavony.
Araka ny hevitry ny RAE un hypsometatra Is a fitaovana fandrefesana ny haavon'ny haavon'ny ranomasina mifototra amin'ny teboka mangotraka ny rano.
Ka hiantso anao izahay zoro, halavirana ary haavon'ny metatra miandry ny mpamaky hamela anay hevitra mitondra ny anaran'ity fitaovana ity.
Ahoana ny fomba fanaovana milina vatomamy landihazo
Samy nihinana vatomamy landihazo daholo ianareo tamin'ny foara, saingy te ho afaka mamorona azy ireo ihany ve ianareo? Cesar Garci Trujillo, ... Tohizo ny famakiana
Fomba fanamboarana angovo
Ho an'ny maro fanandramana, amin'ireo rehetra mifandraika amin'ny vokatra simika, a manetsiketsika andriamby.
Ka entinay eto ianao ny fomba fanamboarana mpamporisika andriamby an-trano
Araka ny hitanao dia hampiasa mpankafy iray avy amina loharano PC izahay izay ampiarahina andriamby neodymium avy amin'ny kapila mafy.
Ahoana ny fomba hanaovana coil Tesla
Na dia tsy dingana iray aza, ity video manaraka ity dia mampiseho amintsika ny faritra sy ny fomba fanaovana azy ... Tohizo ny famakiana
Ahoana ny fomba fanaovana paompin-drano volumetrika
Mitady fanazavana ao baomba hydraulic, Hitako mahaliana ity horonan-tsary ity paompy volumetrika nataon'i Alvaro Morante sy ny mpianatry ny UPV (Polytechnic University of Valencia)
Na dia tsy nanararaotra aza aho dia tadidiko fa amin'ny lohahevitry ny Masinina hydraulic, natomboka ny fifaninanana amin'ny fananganana paompy hydraulic, hahitana hoe iza no afaka mamindra rano bebe kokoa ao anatin'ny 1 minitra. Tsy fantatro raha natao ho an'ity fifaninanana nataon'ny mpampianatra ity ny baomba an'ity horonantsary ity AN'NY TAOZAVA-BAVENTYsaingy nampahatsiahy ahy izany
Ahoana ny fomba fanamboarana compresseur an-trano amin'ny motera vata fampangatsiahana
Avy any Mancera izy ireo dia mamela anay fampianarana momba ny fomba fanaovana compresseur an-trano amin'ny motera mahatahotra. Tonga ny fampianarana ... Tohizo ny famakiana
Aorian'ny fijerena an'ity horonantsary ity dia azoko antoka fa tsy andrinao izany manamboara kart anao manokana. Ilay iray amin'ilay horonantsary dia momba ny fiara elektrika namboarina, home made araka ny iantsoan'ny amerikana azy
Fampisehoana kart elektrika Neurotikart ao an-trano
Ary raha tsy mazava ny anao dia jereo ny fomba fiasan'ny fivoaran'ny an'io karatra ho resy lahatra tanteraka amin'ny te-hanao iray. Bateria 6 fa tsy 4 ary mahatratra 85 km / ora
Izahay dia nandika ny lahatsoratra eto ambany izay mamaritra ny Masinina Wimshurst, satria misy zavatra sasantsasany izay rehefa manova azy ireo dia tsy afaka mankany ihany fa ;-) Ny loharano: Pejy Homer, tranokala izay atoratako ho an'ny rehetra ...
Noforonin'i James Wimshurst, nofaritana voalohany tamin'ny 1883 ary nampiasaina, ankoatry ny fampiharana hafa, toy ny loharano misy herinaratra avo lenta ho an'ny fantsona X-ray aloha, Ity dia a milina elektrostatika, vita amin'ny kapila roa misy insulate material, mifanila, mifanakaiky ary mifandanja amin'ny axis iray ihany, amin'ny fomba ahafahan'izy ireo mihodina haingana amin'ny lalana mifanohitra.
Ny fihodinana azy dia tanterahina amin'ny alàlan'ny tsorakazo iray izay miasa amin'ny paila roa ampifangaroina amin'ny tady tsy misy farany, ny iray amin'izy ireo dia niampita. Ny tarehy ivelany amin'ny kapila tsirairay dia misy sehatra metaly maromaro mifatotra eo akaikin'ny sisiny, izay mandritra ny fihodinana dia kosehina amin'ny borosy vy roa malefaka, mitazona amin'ny faran'ny tsipika vy.
Masinina mikorontana na pendulo roa
Tokony ho nasiako lohateny sci-fi tabloid 'Ahoana ny fomba fanaovana masinina Chaos»Toa hoe hanangana a isika milina fanimbana faobe na famoronana tamin'ny taonjato faha-30.
Fa ny gadget izay asehontsika amin'ny paositra, na dia izany aza milina korontana, tsy fitaovam-piadiana izany, fa pendulo roa sosona ampiasaina amin'ny fizika ho an'ny fandalinana ny Teoria Chaos.
Na dia somary diso fanantenana aza ianao dia azoko antoka fa tianao ilay horonantsary ;-)